Filma Mampiseho Ny Fiainan’ireo “Mpiasa Antselika ao Japàna” Mialokaloka any amin’ny Cybercafe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2015 2:38 GMT
Voarakitra ao amin'ny “Mpiasa Antselika ao Japana,” notontosain'i Shiho Fukada, novokarina niaraka tamin'ny MediaStorm sy Pulitzer Centre ny fiainan'ireo sarimonin'ny cybercafe mpandray vola kely tsy ahafahany manofa trano akory.
Anisan'ireo andian-tsarimihetsika mifototra amin'ny “Mpiasa Antselika ao Japana’” ny lahatsary fanadihadiana, andian-tsary avy amin'ilay mpanao gazety mpakasary Shiho Fukada.
Manasongadina ny olana miantraika amin'ny sehatry ny mpiasa ao Japana nozaraina ho fandaharana telo ny andian-dahatsary fanadihadiana “Mpiasa Antselika ao Japana“, izay mandravaka an-tsary ny krizy ankapobe mahazo ny mpiasa manerantany amin'izao fotoana izao eo anivon'ny asany.
Mitantara ireo toetran'ny tontolon'ny asa ao Japana taorian'ny fihemoran'ny fiharian-karena tamin'ny taompolo 1990 ny “Overworked to Suicide“, [Asa tafahoatra Mamono tena] raha nihaniasa mafy mandritra ny ora maro ireo mpiasa birao ao Japana noho ny tahotra ny ho very asa, ka niafara amin'ny fitombon'ny tahan'ny fahakiviam-panahy aman-tsaina sy ny famonoan-tena izany.
Milaza ny tantaran'i Kamagasaki, Osaka, izay nampiasaina ho tanànan'ny mpiasa mandray karama isan'andro kosa ny “Dumping Ground“. Mampiantrano olona tsy an'asa eo amin'ny 25.000 sy lehilahy antitra izay tsy manan-kialofana ny maro amin'izy ireo izany tanàna izany amin'izao fotoana izao.